July Dream: Keep the promise
ဖတ်ပြီူးသွာြး့ပီ. ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ ယောင်လည်လည်နဲ့ပြန်လာတာ. ။
အဲ ဝေဒနာရှင်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေရယ်၊ သူတို့ရယ် ညီ တွေလည်းပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ တစ်ချို့က လူတော မတိုးတော့ သလို၊ တစ်ချို့က ဆက်လက်ပွေဆဲ မိုက်ဆဲနဲ့ ကိုယ်အနီးအနားက မိန်းကလေးတွေ အပေါင်းအသင်းတွေကို ဆက်လက်ရောဂါဖြန့်ဖြူးနေလေရဲ့